Toamasina : nosamborina tamin’ny fomba feno habibiana i Riri-Be | Tsimok'i Gasikara
← « Le capitalisme entre dans sa phase sénile »
Madagascar : Un français condamné pour proxénétisme clame son innocence →
Toamasina : nosamborina tamin’ny fomba feno habibiana i Riri-Be
Nisy nisambotra sy naka an-keriny androany maraina tamin’ny 1 ora sy sasany i Riri-Be sy Mandraina Félix ary mpikambana 3 ao anatin’ny TMMAN. Tsy mbola fantatra ny toerana misy azy ireo amin’izao fotoana izao. Tao amin’ny trano fonenan’i Mandraina Félix no nitrangan’izany. Olona miisa 13 misaron-tava manao fanamiana mpitandro filaminana no niditra an-keriny tao an-trranon’i Mandraina Félix. Natory tao i Riri-be sy ireo mpikatroka maromaro anatin’ny TMMAN.
Nilaza ho Zandary. Mitantara ny vadin’i Mandraina Félix sy renin’i Mandraina Félix :
Nisy nandondona ny varavarana rehetra ary nilaza fa Zandary. Namaly i Mandraina Félix : haninona aty amin’ny andro amin’ny 1 ora maraina ianareo. Sokafy fa raha tsy sokafinareo io varavarana io dia hovakianay. Nogorobahan’izy ireo ny varavarana ary niditra an-keriny. Tao amin’ny efitrano fatorian’I Mandraina Félix sy ny vadiny no nidiran-dry zareo voalohany. Daroka sy vono ary vely vodi-basy avy hatrany no nahazo an’i Mandraina Félix. Voadaroka koa ny vadiny ary safotra. Nifampitadiavana tao anaty efitrano i Riri-Be, izay natory tamin’ny efitrano iray manokana: niezaka namaly fa tsy nahatohitra. Notsentsemana fasika ny ati-vavan’i Riri-Be, notapahina ny tanany iray. Ny sasany amin’izy 13 lahy misaron-tava niditra an-keriny niambina amina basy an’ireo mpikatroka TMMAN. Noentin’izy ireo amina fiara izy 5 lahy : i Mandraina Félix, Riri-Be ary mpikambana TMMAN miisa 3.
Mbola marary mafy kosa ny zaobavin’i Mandraina Félix izay mbola tsaboina ao amin’ny Hopital Be Toamasina noho ny daroka mafy nahazo azy. Mbola marary mafy koa ilay vavy antitra renin’i Mandraina Félix izay voadaroka ihany koa.
Vola 2 tapitrisa Ar sy finday maro no lasa
Tsy vitany niditra an-keriny sy namono ary nandaroka fa vola 2 tapitrisa Ariary tsipaipiaka nataon’ny TMMAN hanohizana ny tolona no lasan’izy 13 lahy miaraka amina finday rehetra teo ambony latabatra.
Nilaza ho tsy mahalala izao fisamborana izao ireo mpitandro filaminana ao Toamasina
Niezaka niantso an’ireo sokajina mpitandro filaminana rehetra misy ao Toamasina ny tenanay izao maraina izao fa nilaza ho tsy mahalala izao fisamborana izao. Niezaka naka fanazavana teny amin’ny Fitsarana Toamasina koa ny tenanay nilaza ny tao amin’ny Fitsarana fa tsy mbola nisy didy fampisamborana nivoaka momba an’i Riri-Be sy Mandraina Félix ary tsy mbola nisy taratasy fahazaon-dalana hisambotra azy ireo.
Hatramin’ny fotoana nanoratanay ity lahatsoratra ity, mbola tsy hita popoka ny toerana nitondrana an’i Riri-Be sy ny ekipany.
Androany maraina tamin’ny 10 no tokony nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety i Riri-Be
Raha ny fandaraham-potoana sy efa nolazainy omaly, androany maraina no tokony nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety i Riri-Be.
Misy fivoriana maika amin’izao fotoana izao ataon’ireo TMMAN ary efa handeha hanao filazana amin’ireo haino aman-jery momba izao tranga izao.
“Tsy tony intsony izahay. Hisy fanambarana hataonay” hoy ireo TMMAN raha nanontaniana fohy io maraina io.
Hivoatra isan’ora ny toe-draharaha ao Toamasina manomboka eto.
Publié le 13 novembre 2012, dans Madagasikara - Crise, et tagué Mandraina Félix, Riri-Be, TMMAN, Toamasina. Bookmarquez ce permalien.	Poster un commentaire.